Ijaarsa daandiiwwan Oromiyaa hanqina bajataatiin hudhame
Ijaarsa daandiiwwan Oromiyaa hanqina bajataatiin hudhame Featured
Oromiyaa keessattis akkuma godinaalee biroo ijaarsi daandiiwwanii magaalaafi baadiyyaatti xiyyeeffannaan hojjetamaa jira. Haaluma kanaan yeroo ammaa dheerinni daandiiwwan naannichaa walumaagalatti kiiloomeetira kuma 50 yommuu ta’u isaan kana keessaa daandiin asfaaltii kiiloomeetira 43,00dha.
Daandiiwwan kunniin bajata mootummaa qofaan osoo hintaane hirmaannaa ummataatiin kan hojjetamaniidha. Haa ta’u malee, yeroo dhiyoo as ijaarsi daandiiwwan naannichaa tirachaa dhufuunsaatiin ummatni komii kaasaa jira.
Torban darbe wayita Abbaan Taayitaa Daandiiwwan Itoophiyaa raawwii hojii waggoota lamaan darbanii kan Karoora Guddinaafi Tiraanisformeeshinii 2fa qoratetti ijaarsi daandii Oromiyaa sababoota gara garaatiin lafarra harkifachaa jiraachuu Daarektarri Olaanaan Abba Taayitaa Daandiiwwan Itoophiyaa Obbo Arayaa Girmaay ni dubbatu. Akka isaan jedhanitti naannichatti qindoominaan hojjechuu dhabuufi ijaarsi daandiiwwanii lafarra harkifachuun rakkoolee bal’inaan mul’ataniidha.
Anis ijaarsi daandiiwwanii maaliif harkifate jedhee Hogganaa Ittaanaa Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa, Obbo Ibsaa Mahaammadiif gaaffii dhiyeesseen ture. Akka isaan jedhanitti Karoora Guddinaafi Tiraansfoormeeshinii (KGT) 1fatti daandii kiiloo meetira kuma 30 ijaaruuf karoorfatanii kan raawwatan garuu kiiloo meetira kuma 26 qofa.
KGT 2fan waggoota lama lakkoofsisus ijaarsi daandii konkolaataa boba’aa fixe ta’ee jira. Kunis qarshiin ijaarsa daandiif ramadame lammiilee sababa hongeen miidhaman bayyanachiisuuf oole. Daandii KGT 2fa keessatti ijaaruuf karoorfame haa hafuutii kan KGT 1fa keessatti hafan xumuruufuu qarshii biliyoona torba barbaachisu keessaa kan hanga ammaatti argame qarshii biliyoona sadii qofa.
Akkuma beekamu ijaarsa daandiif riqichi bu’uura. Akka Oromiyaatti KGT 1fa keessatti riqaalee 200 ijaaruuf karoorfamee 117 raawwachuun danda’ameera. KGT 2fa keessattis riqaalee 400 ijaaruuf karoorfameera. Garuu maal godha, bajatni riqichaaf ramadame carraa hojii uumuuf ooluusaatiin kan KGT 2fa eegaluun haa hafuutii isa hafeyyuu xumuruun rakkisaa ta’eera. Sababa harkifachuu ijaarsa daandiitiin komii ummatni bobba’iinsa konkolaataarratti kaasaa jiru furuun dadhabameera jedhu.
Gaafii, “Hanqina bajataa qofaa kan ijaarsa daandiiwwanii lafarra harkisaa jiru?” jedhuufis Obbo Ibsaan wayita deebii kennan rakkoon malaammaltummaa sektaricha keessatti bal’inaan akka calaqqisu dubbatu.
Akka isaan jedhanitti, daandiin Arbarakkattee-Galamsoo-Miiccataa (kan Harargee Lixaa) beenyaa mootummaan qonnaan bultootaaf kenne qonnaan bultoota gowwomsuun dhadhaa ibidda buute ta'eera. Namoota badii kana keessatti hirmaatan yoo seeratti dhiyaatanillee haalichi ijaarsa daandiirratti danqaa ta’eera. Kana malees, Godina Gujiifi Boraanaatti ijaarsa daandiitiin walqabatee gochi malaammaltummaa mudateera.
Akkuma beekamu hongeen bara darbee omishaafi beeyladarratti hubaatii guddaa dhaqqabsiiseera. Akka Oromiyaattis rakkoon kun daran hamaa ture .Godinaaleen Booranaa, Gujiifi Baalee hongichaan daran dhaanamaniiru.
Kanaafuu, daandii caalaa ummataaf dursa kennuun sirrii ta'us maallaquma jiru qixa sirriin hojiirra oolchuurratti hanqinatu jira. Tibbana maqaa daandii suphuu jedhuun qarshiin miliyoona lama qisaasa’uusaa Oromiyaa Birodkaastiingi Networki(OBN) dhiyeenya gabaasuunsaa ni yaadatama.
Sababa kontiraaktara ga’umsa hinqabneetiin daandiin ijaarame borumtaa eebbasaa manca’uun baratamaa dhufeera. Daandii manca’e suphuufis bajatni hinramadamu.
Dhumarrattis akka Obbo Ibsaan dubbatanitti, ijaarsa daandii hanqina bajataatiin lafarra harkifamaa jiru hirmaannaa hawaasaafi qaamolee birootiin xumuruuf karoorfatanii itti adeemaa jiru.
Walumaagalatti, waggoota kurnan darbanii as akkuma naannolee biroo Oromiyaattis babal’inni daandii sadarkaa gaariirra jiraatus baay’ina ummataafi bal’ina lafa naannichaan yommuu wal bira qabamu ammayyuu gahaa miti. Kanaafuu, ijaarsa daandii rakkoo bajataan hudhame kana qaama hawaasaa, mootummaafi mitmootummaa hirmaachisuun xumuruun barbaachisaadha.
Torban kana/This_Week 11896
Torban darbe/This_Month 91733
Guyyaa mara/All_Days 1603691